SIDA LOO KAYDIYO BASASHA MAQAASI IYO QOLKA - BOW
Sida loo keydiyo basasha xilliga jiilaalka
Basasha waa mid ka mid ah dalagyada ugu caansan ee koraan dhammaan beerta, iyada oo aan loo eegin aagga cimilada ama roobka. Ka dib markii la goosanayo dhibaatada badanaa waxay la timaadaa kaydinta basasha.
Marka la eego dhibaatada alaabta la tuuray, milkiilayaashu waxay la yaaban yihiin: sidaa daraadeed sida si haboon loogu kaydiyo basasha si looga fogaado khasaaraha Taasi waa ku saabsan iyo waxaa laga hadli doonaa maqaalkeena.
Sida loo diyaariyo loona qallalo basasha kaydinta mudada dheer
Walaac maadaama ay u muuqan karto, laakiin wakhtiga la ururiyay oo si habboon loo qalajiyey basasha ayaa si fiican loo hayn doonaa xitaa xaaladaha aan fiicnayn, sidaas darteed, diyaarinta basasha kaydinta muddada-dheer waa in la sameeyaa ka hor inta aan la ururin.
Inta badan, bannaanka u soo baxaan xaqiiqda ah in xididada aan la helin miisaanka lagama maarmaanka ah wakhtiga ururinta. Dhibaatadani waxaa lagu xallin karaa dhawr siyaabood:
Foorida cagaarka dhulka. Habkani wuxuu ku siinayaa baska fursada ah in tamar laga helo qaybta cagaaran, laakiin kordhinta kaydka dalagga. Bannaanka beerta waxaa lagula talinayaa in ay cufanaan bacriminta Juun-Juulay, iyadoo ku xiran jawiga.
Jarida xididada ama xoqidda guluubka. Habkani wuxuu ka caawiyaa dhirta inuu fahmo in dhammaan tamarta aad u baahan tahay inaad ku rido sumoobidda nukliyeyaasha ee guluubka. 14-15 maalmood ka hor goosashada, xididdada basasha yar yar yihiin. Haddii aad ka baqeyso inaad waxyeelo geedka ama nalka waa mid aad u adag in la fariisto dhulka, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad googooto dhulka, soo saarida xididka. Qalliinkan ka dib, ma dhigi kartid basasha, haddii kale waxaad halis u soo ururinaysaa alaabta cayayaanka ah. Ha ilaawin in aad u baahan tahay oo keliya inaad gashato guluubka cimilada qalalan.
Ma taqaanaa? Noocyo qabow oo macaan ayaa lagu koray oo kaliya gobollada koonfurta. Waxay dhadhamiyaan weyn waxayna bixiyaan beeri wanaagsan, laakiin si liidata ayaa loo kaydiyaa oo aan haboonayn gaadiidka muddada dheer.
Haatan waxan ka hadlaynaa goosashada iyo qalajinta haboon.
Uruurinta xididka waa inay ahaato mid gaar ah oo cimilada qalalan. Basasha waxay ururiyaan cimilada roobka ee muddo dheer aadna u bilaabi karto kallana. Geedka miraha xilliga goosashada waa in si buuxda loo sameeyaa: miisaanku waa casaan midab leh ama midabkeeda, lakabyada dibeddu waa qalalan oo si sahlan u kala soocaan miraha, cagaarka ayaa gebi ahaan qalalan.
Bannaanka loo yaqaan 'Novice' ayaa badanaa danaynaya su'aasha: goorma ayaa ah waqtiga ugu fiican ee laga saaro basasha si ay si fiican u hayso. Iyada oo ku xiran aagga cimilada, basasha ayaa la goostay midba midka dhexe ama dhamaadka bisha Sebtembar. Si aan wax u yeelin dalagga dalagga, waxa si taxaddar leh loo qaadaa oo waxoogaa yar ayaa soo jiidaya dushooda. Ka dib goosashada, waxay bilaabaan inay si dhakhso ah u engegaan.
Waa muhiim! Burburkii la jajabiyey ama laysku gooyey laguma qalajin karo qashinka xididada. Nalalka la diiday waa la tuurayaa ama la cunay sida ugu dhakhsaha badan.
Basasha qalalan laba siyaabood: sariirta ama hoostiisa. Haddii aad hubto in labada todobaad ee soo socda ay jiri doonaan jawi diiran, qalalan, markaa waxaad ka bixi kartaa dalagyada xididaha ee la kariyay ee sariiraha. Xaaladda ka soo horjeeda, qaansada ayaa lagu dhejiyaa daboolo daboolan oo ka ilaaliya qaansada roobka. Cayayaanka waa in si wanaagsan loo nadiifiyaa, qalalan iyo fayow.
Su'aashu waxay inta badan soo baxdaa: intee le'eg waa in la qalajiyaa si loo baabi'iyo qoyaan aan loo baahnayn.
Dhammaan waxay ku xiran tahay cimilada aad ku soo ururisay qaansada, qolka, heerkulka gudaha iyo qaansada laftiisa. Celcelis ahaan, basasha ayaa la qalajiyey ilaa laba toddobaad. Si kastaba ha noqotee, haddii ciidda uu qoyan yahay ama qoyan yahay ayaa la aasaasay waddada, xilliga qalajinta ayaa gaari kara 25-30 maalmood.
Qodobbada ugu muhiimsan ee la tixgelinayo markaad qallajiso basasha.
Iyadoo qalajinta, basasha ayaa la dhigaa lakab khafiif ah si loo dedejiyo geedi socodka.
Ka hor inta aadan qalajin, nadiifinta basasha si taxaddar leh uga soo haray dhulka iyo harta dhirta (jarida xididada ama dusha sare uma baahna).
Iyadoo lagu qalajinayo, basasha waa in loo rogaa dhowr jeer si looga hortago in ay hoos u dhacaan.
Dhowr usbuuc kaddib marka uu bilaabo qalajinta, basasha ayaa la gooyaa (waxay jaraan dushooda, iyagoo qoorta 4-5 cm dheer u dhaafaya). Xididdada ayaa xoogaa yar ah si ay uga hortagaan xididka ka soo baxa.
Ka dib markii la jarjarey basasha ayaa loo kala soocayaa oo loo kala saaraa. Kaydinta waxay qaadataa midab casaan leh oo casaan leh oo casaan leh iyada oo aan la arki karin dhaawac.
Waa muhiim! Inta lagu jiro qallajinta basasha waxaa lagama maarmaan ah in laga reebo gudaha qoyaanka ama qashinka xididada.
Waa maxay noocyada basasha sida ugu wanaagsan loo hayo
Haatan aan ka hadalno noocyada ugu fiican ee basasha ah ee kaydinta. Ma aha sir ah in jinsiyadu ay ka saareen noocyo badan oo dhaqanka ah baahida kala duwan: si aad u hesho tiro badan oo ah miraha, goosashada weyn, qayb cagaaran oo culus ama dhadhan gaar ah. Dareenka dadka jilicsan ayaa soo jiidanaya iyo ilaalinta tayada alaabta, sidaas darteed waxaan heysanaa fursad aan ku doorano noocyo dhawr ah oo si wanaagsan loo ilaaliyo, iyada oo la ilaalinayo qaabkeeda iyo dhadhanka.
Ma taqaanaa? In noocyo fiiqan ee basasha ku jira tiro badan oo ah saliidaha lagama maarmaanka ah iyo sonkorta, taas oo keena fiiq ah ee xididka.
Waxyaabaha kala duwan ee basasha buluug bislaaday. Dalagyada rootiga waxay leeyihiin qaab sax ah oo miisaankoodu yahay ilaa 150 g. Basasha waxaa loo isticmaalaa labadaba cuntooyinka kala duwan iyo ilaalinta.
Dalagga Root wuxuu leeyahay dhadhan fiiqan, sidaa daraadeed wuxuu u fiican yahay marinades. Ka dib markii ururinta habboon iyo qalajinta, xididdada waxaa si fiican loo kaydiyaa qol kasta oo qalalan.
Kala duwan oo hore u bislaaday basasha hurdi. Waxay ku koraan cimilada kulul iyo qabow. Nalalka waxay leeyihiin qaab wareeg iyo miisaankeedu yahay ilaa 80 g. Waxaa loo isticmaalaa labadaba ilaalinta iyo diyaarinta suxuunta kala duwan.
Waa muhiim! Dhammaan noocyo basbaas ah oo aad u fiiqan ayaa ah kuwa la xoqdo oo si fiican loo hayo. Dalagyada rootiga noocyada noocan oo kale ah ayaa la daboolay dhowr lakab oo qolfaha dibadda ah.
Kala duwan xilliga badhtamaha xilliga basasha. "Sturon" waa noocyo kala duwan: adkaysi u leh qoryaha iyo cudurada. Nalalka ayaa wareegsan, cufan, rinji leh midabka dahabka. Dalagga xididku wuxuu leeyahay tiro ah 90-140 g waxayna leedahay dhadhan adag. Isticmaalidda, qaansada waa wax badan. Dalagyada rootiga si fiican ayaa loo kaydiyaa, iyada oo aan laga lumin qaabka iyo dhismaha cufan.
Bacriminta bartamihii xilli-ciyaareedka oo bislaaday. Jinka waa isku mid ah sida Sturon kala duwan. Saxarka guluubka waa casiir leh, caddaan, wuxuu leeyahay dhadhan jilicsan.
Dalagga geedka ayaa la isku dhajiyey, oo miisaankeedu yahay 80-140 g. Sida noocyada kor ku xusan, waxay leedahay isticmaalka guud.
Waxaa muhiim ah in la fahmo in noocyada noocan ah ay sidoo kale ku dhici karto in la gooyo haddii ay si sax ah u goosteen ama si xun u qalajiyey.
Marka heerkulka lagu keydiyo basasha
Milkiilayaasha badankood waxay xiiseynayaan heerkulka kaas oo basasha lagu kaydiyo jiilaalka. Kadib qalajinta, basasha ayaa loo baahan yahay in la uruuriyo laguna wareejiyo meel kale oo loogu talagalay kaydinta mudada dheer. Qolka loo qoondeeyey waa lagama maarmaan in la abuuro microclimate gaar ah oo ka hortagi doona khudradda laga bilaabo khalkhalka, lakabka ama biqilka.
Ma taqaanaa? Basasha cusub oo la jajabiyey ayaa loo isticmaalaa gubista si loo yareeyo xanuunka iyo ka hortagga bacda. Dalagga dalagga ma aha oo keliya bixinta qoyaan lagama maarmaanka u ah aagga waxyeellada leh, laakiin sidoo kale wuxuu burburiyaa microbes hareeraha gubashada.
Nolosha shafka ee basasha ayaa si toos ah ugu tiirsan heerkulka, sidaa darteed waxaan ka fikirnaa dhowr fursadood oo suurtagal ah.
Waxaa jira saddex siyaabood oo lagu keydiyo khudaarta cagaaran:
Kaydinta qabowga waxay tilmaamaysaa hoos u dhac heerkulka ah -3 ˚C. Iyada oo kaydinta sida, khasaaraha basasha waa yar yahay, laakiin ilaalinta heerkulka joogtada ah waa mid aad u adag, iyo isbedelka ugu hooseeya ayaa dhali karaa dalagga oo dhan (haddii heerkulka qolka ku dhaco in laga yareeyo 4-5 C, ka dibna basasha ayaa barafoobaya).
Habkani wuxuu ku habboon yahay jajabyo khaas ah kaas oo heerkulka saxda ah lagu hayo iyadoo la adeegsanayo nidaamyada xakamaynta.
Habka ugu wanaagsan waxay u maleyneysaa kaydinta basasha heerkul sarreeya (+ 18-22 ˚C). Heerkulka noocan oo kale ah wax kharash dheeraad ah laguma hayn karo guriga, laakiin waxaa haboon in la xusuusto in qoyaanka uu noqon karo ugu yaraan 60-70%. Microclimate noocan oo kale ah waxay keeni kartaa madaweynta derbiyada ama waxyeelada qalabka guriga, sidaas darteed waxa ugu wanaagsan in lagu rakibo kuleyliyaha dhulka hoostiisa ama qoryaha iyo qaansada ku wareejinta. Si kor loogu qaado qoyaanka, isticmaal weelasha biyo.
Milkiilayaasha badankood waxay xiiseynayaan su'aasha ku saabsan sida loo kaydiyo basasha si aysan u karin. Dalagyada dalaggu wuxuu soo baxaa oo keliya marka ay jirto qoyaan badan oo qoyaanka ah. Sidaa darteed, haddii aad dareentid in basasha uu bilaabay inuu soo baxo, yareyso qoyaanka hawada.
Habka isku dhafan Si kastaba ha ahaatee, way kala duwan yihiin, si kastaba ha ahaatee, waxay u oggolaaneysaa in ay badbaadiso alaabooyinka leh khasaaraha ugu yar. Ka hor inta bilawga ah ee cimilada qabow, basasha waxaa lagu kaydiyaa gudaha gudaha heerkul ah 18-20 ° C, haynta qoyaanka hawada ah 60-70%.
Marka heerkulka ka baxsan daaqadu ay noqoto mid xun, basasha si tartiib ah ayaa loo qaboojiyey (dhowr maalmood ka dib) oo lagu keydiyey minus 1-3 ° C. Xilliga guga, marka uu dhaxafku ka gudbo, basasha ayaa loo wareejiyaa qol diiran oo lagu kaydiyaa heerkul ah ugu yaraan +18 C
Waa muhiim! Basasha ma jecla isbeddel muuqata oo heerkulkeedu sarreeyo, markaa ka hor intaadan ka dhaqaaqin kuleylka ilaa qabow (iyo wixii ka baxsan), waxaad u baahan tahay inaad abuurto nooc "goobo" leh heerkul caadi ah.
Iyadoo la raacayo shuruucda oo idil, xididdada waxaa lagu kaydin karaa 200 maalmood ama ka badan marka la dhigo kaydinta.
Xeerarka iyo hababka lagu kaydiyo basasha madoow
Suurtagalnimada qolka kululaynta waxay dhigaysaa suurta gelinta waqti dheer ee basasha ee maqaasiinka. Si kastaba ha noqotee, si fudud ayaa u jajabiyaa xididada dusha sare ee aaney dhicin, haddii kale way ku silcin karaan. Sidaa daraadeed, waxaan tixgelineynaa fursadaha loogu talagalay kaydinta basasha oo ka hadal wixii faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka uu leeyahay.
Kiisaska caagga ah ama alwaax
Wixii kaydinta basasha waxaad isticmaali kartaa sanduuqyo leh meel hoose oo hoose iyo dherer yar oo dhinacyada. Waa lagama maarmaan in la qoyno qaansada iyaga oo leh lakab aan ka badnayn 50 cm (siday u kala horreeyaan, dhererka sanduuqa waa inaan ka badnayn 60 cm). Weelkan kaydka ah wuxuu kaydiyaa meel, laakiin waxaa habboon in la xasuusto in sanduuqyada aysan ku xirnayn dabaqa iyo derbiyada maqaasiinka. Waxaa lagu dhejin karaa dabaqyada ama kuraasta. Basasha waa in lagu kaydiyaa sanduuqyada marka ay dhacdo in aad leedahay meel yar oo miiska ama wax badan oo alaab ah.
Dhibaatada kaydinta ee sanduuqyada waa in xididada hoose ee weelka ay ku daalaan oo ay bilaabaan in qudhmi. Waxaad wax ka baran kartaa tan oo kaliya adoo urinaya ama xayiraya dhamaan weelasha. Sanduuqyada ayaa leh dhinac wanaagsan.
Faa'iidada ugu weyn ee weelasha kaydka ah - kalluunku kuma faafo sanduuqa (haddii aanay istaagaynin).
Marka la isticmaalayo sanduuqyada kaydinta muddada dheer ee basasha, waxaan ku talineynaa in la hubiyo tayada alaabta ugu yaraan hal mar bishii si looga fogaado lakabka tiro badan oo basasha ah.
Baalalka dharka leh, waxaad sidoo kale badbaadin kartaa basasha xilliga jiilaalka. Waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho bacaha yaryar, sababtoo ah waxsoosaarku waa ka yar yahay iyaga, fursadda yar ee uu ku jeesanayo ama uu noqonayo ciyar.
Faa'iidooyinka isticmaalka bacaha waxaa ka mid ah:
Awood dhexdhexaad ah;
Kala soocista alaabtan ayaa sidoo kale ku filan. Haddii baska uu bilaabo inuu bacda ku boodo, ka dibna ma arki kartid adigoon wax faaruqin. Intaa waxaa dheer, haddii bac "qalab", ka dibna nalalka hoose ee qumbaha.
Waxaad ka heli kartaa bacaha kaliya hal lakab, sababtoo ah, sanduuqyada, waxay leeyihiin wax taageero ah iyo cadaadiska mass ee dhan lakabka hoose ee dalagyada xidid.
Sidaa daraadeed, waxaa ugu wanaagsan in lagu kaydiyo bacaha qadar yar oo alaab ah oo ku jiri doona waqti gaaban.
Waa muhiim! Waa mamnuuc inaad isticmaasho bacda geela, maadaama aysan u oggolaanin hawada inay maraan oo ay uruuriso qoyaan.
Qalabka dayactirka ama tifaftirka
Hooyooyinka intooda badani waxay ku jiraan basal (pantyhose). Si caadi ah, habkan kaydinta ma aha mid xun sida ay u muuqato: shimbiraha waa neefsan oo nuugaya qoyaan; Intaa waxaa dheer, iyada oo loo marayo tifafyada waxaad arki kartaa tayada nalalka iyo waqtigeeda si aad u diiddo cayayaanka.
Qiyaas yar oo yar, habkan kaydinta ma aha mid xun, laakiin haddii aad haysato xoogaa yar oo basal ah, ka dibna badeecaddu ma noqon doonto wax ku filan nuska alaabta. Sidoo kale ha ilaawin in alaabada la burburin karo.
Sidaa daraadeed, isticmaalka badeecadaha ayaa suurtagal ah kaliya in la kaydiyo qadar yar oo ah dalagyada xididka ah.
Nidaamkan kaydinta wuxuu ku haboon yahay oo keliya basasha yaryar iyo dhexdhexaad ah. Dalagyada rootiga waxaa la dhigaa weelasha sida ukumaha, xiran oo gashan rack. Waxaad isticmaali kartaa weelasha kaliya haddii aad leedahay meelo badan oo Maqsin ama waxoogaa yar. Basasha ee weelka lagu ilaaliyo looma ilaalin karo lakabyada, laakiin, hal jeermis oo qudh ah ma burburin doono boqolaal, sidaa daraadeed habkani wuxuu yareynayaa khasaaraha.
Waa muhiim! Waxaa fiican inaad isticmaasho baco yar-yar oo furan ama caag ah. Baakadaha warqadaha waa la mamnuucay (waxay uruurinayaan qoyaan waxayna si dhaqso ah u burburiyaan).
Faa'iidooyinka weelka noocan oo kale ah waxaa ka mid ah wareegga hawada oo u dhexeeya xididada iyo kondhiyeynta taas oo sameysmi doonta daboolka weelka oo ku dhejiya nalalka.
Baakado ama xirmo
Xusuusashada fursadaha kala duwan ee ku saabsan sida loo kaydiyo basasha, waxaa habboon in la xasuusto habka hore u qaabaysan - xejin weydo. Haddii aad go'aansatid in aad nuugo nalalka kuusku xidhnaado, ka dibna marxaladda qallajinta ma jari karaysid dushooda.
Goobjirta xoqashada wakhti badan ayay qaadataa. Isla markiiba waxaad u baahan tahay inaad ka fekerto sida loo xiro dhammaan miisaanka si markaa xashiishadu aysan taaban midba midka kale, derbiyada ama dhulka.
Faa'iidooyinka habkan waxaa ka mid ah wareegga hawada oo wanaagsan, maqnaansho dheeraad ah oo miro kasta ah (sida sanduuqyada ama boorsooyinka) iyo awoodda lagu xakamaynayo tayada nalalka.
Si kastaba ha noqotee, waxaa haboon in la tixgeliyo, sida kiisaska shimbiraha, dushooda ma aha kuwo aad u adag oo u nugul duufaanka. Sidaa daraadeed, qoyaanka sii kordhaya, dhammaan "xayawaanka" waxay ku jiri karaan dabaqa waxayna si deg deg ah uga sii darayaan.
Sida loo kaydiyo basasha guriga
Kala hadal sida loo kaydiyo basasha guriga. Milkiilayaasha badankoodu ma laha maqaarado waaweyn ama qolal, iyo basasha ayaa u baahan in la dhigo meel jiilaalka ah. Sidaa daraadeed, waxaan tixgelineynaa fursadaha suurtogalka ah ee kaydinta dalagyada xididka ee guriga.
Haddii aad haysato dambiilo yaryar oo badan oo guriga ah, markaa basasha ayaa si fiican loo xafidaa. Godadka ku jira baska ma ogola in basasha ay sii xumaanayaan, iyada oo la abuurayo wareegga hawada. Qalabka dambiilaha laftiisa ma saameyn doono xididada.
Dhibaatada keliya ee weelka noocan ah waa cadaadiska lakabka hoose. Haddii aad ku dhaafto oo aad basal badan saarto baska, si deg deg ah u burburiso xididada hoose iyo waxay bilaabi doonaan iniinaha.
Godadka ku jira dambiilaha ayaa saameyn taban ku yeelan kara: iyaga, cayayaanka ama biyaha ayaa si sahlan u heli kara qaansada.
Sida kiiska Maqalka, sanduuqyada waxay noqon karaan kuwo faa'iido leh marka lagu kaydiyo guri dabaq ah. Isticmaalida weelkan noocan oo kale ah, waxaad badbaadin kartaa meel aad u weyn, laakiin ha iloobin in la'aanta qoyaanka macnaheedu maaha in qaansada uusan ka leexin jaranjarada ama hawo xumida.
Waxaan kugula talineynaa inaad sanduuqyada ku ridaan basasha ilaa ugu yaraan isla markaana ku qasmaan mararka qaarkood si basasha loo ilaaliyo.
Ma taqaanaa? Sababta noocan oo kale ah ee basasha ayaa ku jira maaddo gaar ah - muraayad. Marka basasha la gooyo, muraayadda ayaa la sii daayo oo lagu kala diraa biyaha iyo, gaar ahaan, ilmo aadanaha. Tani waxay ka kooban tahay sulfuric acid, taas oo xannibaysa xuubka xabka ee isha.
Basasha jiilaalka waxaa la gelin karaa sanduuqyada kartoonada caadiga ah, laakiin kaydinta khudradda ee weelka noocan oo kale ah ma aha doorka ugu fiican. Sanduuqyada ma aha kuwo si xun u neefsan kara, laakiin waxay heli karaan qoyaan ama jeexan. Intaa waxaa dheer, sida sanduuqyada, waxaa jira cadaadis hoose ee lakabka hoose ee xididada.
Haddii aad go'aansato inaad ku kaydiso basasha sanduuqyada kartoonada, ka dibna samee tiro ballaaran oo meelo yaryar ah dhinacyada oo dhan si loo hubiyo helitaanka hawada cusub.
Weelasha noocan ah waxaa badanaa loo isticmaalaa kaydinta basasha ee dukaamada waaweyn. Mesh Polypropylene waxay bixisaa wareegga hawada oo waxay kuu ogolaaneysaa inaad aragto waxyeelo soo noqnoqday wakhtigeeda. Haddii weelkaas aan loo isticmaali Karin Maqsin, ka dibna aqalka dhexdiisa basbadan laguma hanjabin qoyaan badan, shabakaduna waa mid ka mid ah fursadaha ugu wanaagsan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa haboon in la xasuusto in shabakad aad arki doonaa kaliya kaliya lakabka hore ee basasha. Haddii ay jiraan dalagyo caleemo qashin ah oo ku yaal bartamaha bacda, ka dibna si aad u xallisid oo uga saarto halxidheenka, waxaad u baahan tahay inaad bacda oo dhan ka faaruqiso. Sidaa darteed, ha isticmaalin boorsooyin yaryar ama si taxadar leh u baaro alaabada ka hor inta aadan dib u laaban.
Duubka ama bacaha warqadda
Dharka iyo bacaha warqadaha waxaa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo basasha guri dabaq ah kaliya haddii aysan jirin xulashooyin kale. Bacdaas, ma arki kartid xididdada la jabiyay, waxaa jira cadaadis joogto ah lakabka hoose iyo wareegga hawada oo liita. Haddii aad joojisid ikhtiyaarkan, ka dibna isku day inaad dooratid bacaha yaryar ama baakadaha basbeel si aad u dhajiso dhererka boorsada aan ka badnayn 30 cm.
Qoryaha ama pantyhose
Haddii aan cidina u aragto sida "tara" sida hoose ee dhismaha, ka dibna sheyga oo leh qaanso dabaqa ah ee guriga ku yaal ma aha oo kaliya u muuqdaan wax la yaab leh oo siinaya ur adag, laakiin sidoo kale waxay qaadataa meelo badan. Hantidhowrku wali waa ikhtiyaar wanaagsan haddii aanad tixgelin ku laheyn muuqaalka heestaha. Waxay nuugaan qoyaan waxayna u oggolaadaan hawada inay wareegto inta u dhexeysa nalalka.
Waa muhiim! Marka lagu kaydiyo basasha qolalka, weelka aan la dhigin meel u dhow kuleylka ama daaqadaha.
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah fursadaha ugu fiican ee kaydinta basasha ee aqalka. Qalabka "werwerka" waxaa lagu dhejin karaa qolka xarkaha ama qolka (xannaaneeyso in qolku qalalan yahay). Лук не соприкасается с полом, получает доступ свежего воздуха, отсутствует давление на луковицы.
Dhinaca xun - maalgashi ballaaran oo loogu talagalay "dharka"; xooga hoosta "burcad".
Tricks for kaydinta dheer ee basasha
IyadooWaxaa jira dhowr siyaabood oo aad uga caawin karto ilaalinta basasha qoyaanka ama biqilka. Isticmaalka talooyinkayaga, waxaad badbaadin kartaa miraha oo dhan oo aan lumin.
Doolowgu wuxuu nuujiyaa qoyaan aad u wanaagsan, markaad adigu ilaalisid basasha qolka qoyan ama qolka kale ee qoyan, ku dar 200 g oo ah joornaali 10 kg oo badeecado ah oo ku jira weel leh khudaar cagaaran.
Cawska ama lime wuxuu ka caawiyaa joojinta biqilka basasha. Haddii xididdadu ay bilaabaan inay dhalaan, waxaad u baahan tahay inaad gooyso xididdada oo iyaga ku dhejiso dhoobo ama xal lime ah. Waa in la xusuustaa in qaansadaas oo kale ay noqon doonto mid aan ku habboonayn qaabka wax lagu beerto.
Basasha qumbaha waxaa la qalajin karaa iyadoo la isticmaalayo foorno, dabka ama batteriga. Si aad u qallajisid khudradda foornada, waxaad u baahan tahay inaad ku sii furtid lakab khafiif ah, u rog dhinaca ugu yar kana bax albaabka. Marka maqaarka ku jira basasha uu noqdo mid qalalan oo si fudud loo kala soocayo, qalajinta waa la dhammeeyaa.
Si loo yareeyo qoyaanka qolka, waxaad ku xiran kartaa baaldiyada ash ama sand. Qalabkani wuxuu si fiican u nuugaa qoyaanka waxaana dib loo isticmaali karaa.
Ma taqaanaa? Basasha waxaa ku jira sonkor dabiici ah oo ka badan tufaax iyo isteroberi. Cinjab basasha ah waxaa ku jira sonkorta 6%.
Hadda waxaad taqaanid ku filan inaad soo ururiso alaabtii waqtigeeda, si habboon u qalaji oo u ilaali ilaa guga. Waxaan kuu sheegnay waxaad u baahan tahay inaad ku kaydiso basasha guriga ama miiska, sida loo xaliyo dhibaatooyinka suurtagalka ah iyo nooca wanaagsan ee ay tahay. Raac shuruucda la sharraxay, oo beergooysinku waxay ku jiri doonaan hal sano ka badan.